Maimane sends message of support to Zimbabwean presidential candidate Chamisa | News24
Zimbabwean Police Officer controls the access to a polling station as people started to queue early in the morning (Luis Tato/AFP)
DA leader Mmusi Maimane has offered his support to Zimbabwe's opposition MDC Alliance leader Nelson Chamisa, who is vying to become the country's president.
Zimbabwe went to the polls on Monday for historic elections. Chamisa is hoping to unseat incumbent president and Zanu-PF leader Emmerson Mnangagwa.
Mnangagwa replaced Robert Mugabe in November last year following a much-publicised military intervention.
SCROLL: The latest on the crucial Zim polls - Long queues, alleged delays and opposition cries foul
Maimane, who is also the chairperson of the Southern African Platform for Democratic Change (SAPDC), told Chamisa that the SAPDC stood with him in his fight for freedom in his country.
"We wish you well and are praying for a safe, free and fair election in Zimbabwe today, and we know that if it is democratic, you will triumph," Maimane said in a letter.
He said Zimbabweans have realised the time had come for their "wonderful country to be liberated from liberation movement politics".
"Zimbabweans have suffered enough under greedy, selfish, Big Man politics. They know as we do that the future of Zimbabwe, the future of Africa, lies in post-liberation politics.
"We have seen that liberation movements never make good government. Neither here in Zimbabwe, nor in South Africa, nor indeed anywhere on this continent," he said.
Wishing the MDC success in elections. Democracy requires that we hold parties accountable and as my late friend Morgan would say, Zim must see post liberation era politics. Zanu mustn’t trick people into a belief that a change of leader is a change of party. AFRICA needs change pic.twitter.com/PS6M1MBHfo
— Mmusi Maimane (@MmusiMaimane) July 30, 2018
Maimane added that it was time for a new generation of leaders to step up for the continent, and their elections would reverberate throughout Africa.
"I salute your efforts to bring meaningful change to the people of Zimbabwe. I know that you will rebuild your country on the foundational values of a respect for constitutionalism and the rule of law, and a commitment to [an] honest, accountable and transparent government."
Read more on: mdc | da | mmusi mai­mane | emmerson mnangagwa | nelson chamisa | zimbabwe